दिल्लीमा थपिए अर्का लेग स्पिनर, अब सन्दीपलाई कति गाह्रो? - Everest Dainik - News from Nepal
दिल्लीमा थपिए अर्का लेग स्पिनर, अब सन्दीपलाई कति गाह्रो?
काठमाडौं । इन्डियन प्रियिमर लिग (आइपीएल) काे आगामी संस्करणका लागि टिमहरुले खेलाडी फेरबदल गर्न सुरु गरेका छन । यसैबीच मुम्बई इन्डियन्स र दिल्ली क्यापिटल्सले पनि एक–एक खेलाडी साटफेर गरेका छन् ।
मुम्बईले लेग स्पिनर मयंक मयंक मार्कडेलेलाई रिलिच गरेको छ । मुम्बईले उनलाई रिलिज गरेसँगै मार्कडेलाई दिल्लीले टिममा लिएको छ । मंयकको स्थानमा मुम्बईले दिल्लीका अलराउन्डर शेरफन रदरफोर्डलाई टिममा सामेल गरेको छ । शेरफनले वेस्ट इन्डिजका लागि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेलिसकेका छन् ।
याे पनि पढ्नुस ग्लोबल टि–२० लिगः सन्दीपआवद्ध टोरन्टोको पहिलो जीत
दुई वर्षअघिको सिजनमा उत्कृष्ट खेलेका मार्कण्डे भारतीय भएकाले उसैपनि गत सिजनमा आधा भन्दा बढी खेल्न नपाएका सन्दीपले टिममा पर्न थप प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्नेछ। सन्दीपले गत सिजन दिल्लीबाट ६ खेल खेल्दै ८ विकेट लिएका थिए।
अब दिल्लीमा नेपालका सन्दीपसँगै मार्कण्डे, अमित मिश्रा र राहुल टेवाटिया गरी चार जना लेगस्पिनर भएका छन्।
याे पनि पढ्नुस नजिकिँदै सीपीएल, को–को छन् सन्दीपको टिममा स्टार क्रिकेटर?
ट्याग्स: आइपीएल, मायंक मार्कण्डे, सन्दीप लामिछाने